धार्मिक अनुस्ठानको प्रयोगबाटै आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता उपाए अपनाउनुहोस - सुदूरखबर डटकम
धार्मिक अनुस्ठानको प्रयोगबाटै आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता उपाए अपनाउनुहोस
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder June, 19 2018
भण्डार कक्ष कहाँ राख्ने : भण्डार कक्ष दक्षिण पश्चिम वा पश्चिम भागमा बनाउनुपर्छ जसकारण समृद्धिको बाटो खुल्छ । झ्याल ढोकाको सफाइ : घरको ढोका र झ्यालको नियमित सफाइ गर्नुस् किनकि घरमा आउने धनसँग यिनको सोझै सम्बन्ध हुन्छ । यी कुरा फोहर हुँदा धनप्राप्तिमा बाधा पुग्छ ।
प्याजी रंग : घरमा प्याजी रंग लगाउँदा धन आकर्षण गर्न सकिन्छ । यो रंगका बोटबिरुवा घरमा भए भने पनि तपाईंलाई धनको कमी हुँदैन । नई दुनिया/जागरणबाट
शिव भनवानले गणेशजीको टाउको काटेको ठाउँ : देख्ने बितिक्कै लाइक र शेयर गर्नुहोस शुभ लाभ मिल्नेछ
भोली सोमबारको दिन यस्तो काम गर्नुस तपाईले सोचेको पुरा हुनेछ ! एकपटक अवश्य पढ्नुहोस
सावधान ! माघेसंक्रान्तिमा भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता गल्ती नत्र ! सुरु हुनेछ तपाईको खराब समय